National Power News:: “२०६४ मा नेपाली काँग्रेस एकिकरण हुनुनै गलत थियो” : पुष्पराज पराजुली National Power News:: “२०६४ मा नेपाली काँग्रेस एकिकरण हुनुनै गलत थियो” : पुष्पराज पराजुली
“२०६४ मा नेपाली काँग्रेस एकिकरण हुनुनै गलत थियो” : पुष्पराज पराजुली
नेपाली काँग्रेसबाट भर्खरै विद्रोह गरी नेपाली काँग्रेस (विपी) गठन भएको छ । मुलतः नेतृत्वले विपी कोइरालाको आदर्श र सिद्धान्तबाट च्युत भइ सत्ता, शक्ति र पैसाको लागि राजनीति गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको अगुवाइमा हरिबोल भट्टराइको सभापतित्वमा सो पार्टी गठन भएको हो । यही पार्टी गठनको पृष्ठभुमी र औचित्यको बारेमा पावरन्युज डट कमका लागि सम्पादक नवराज दुवाडी ले नेपाली काँग्रेस (विपी) का महामन्त्री पुष्पराज पराजुली संग गरेको कुराकानी :
चुनावको मुखका नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो नी ?
यो पार्टी चुनावको मुखमा घोषणा मात्र भएको हो हामीले गत असार २८ गतेनै विधिवत ढंगले पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढीसकेका थियौँ ।
नेपाली काँग्रेस (विपी) गठन गर्दै गर्दा, यसमा अगुवाइ गर्नेहरु टिकट नपाएका, पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हारेका हरुको वाहुल्य देखिन्छ नी ?
पार्टी घोषणा गर्ने समयको बारेमा हामीले साथीहरुवीचमा छलफल पनि गरेका थियौँ । वाम गठबन्धन, चुनावको मुख भएकोले अलि नकारात्मक सन्देश जान्छकी भन्ने विषयमा छलफल गरेका हौँ । तर पार्टी भएर गएपछि चुनावमा भाग लिने, उम्मेद्वारी दिने कुरा पनि आउँछ, त्यसैले पार्टीको घोषणा गरेर जानुपर्ने स्थिती अहिलेनै आयो ।
अर्को कुरा के भने हामी अधिकांश जति पनि पार्टी पदाधिकारीहरु छौँ सबै टिकटको सिफारीस भएका र टिकट पाउने हैसियतका नै हौँ । त्यसैले टिकट नपाएकाहरुको बाहुल्य छ भन्ने कुरामा दम छैन ।
यदि यसमा दम छैन भने गत असार २८ गतेनै दर्ता भएको पार्टी स्थानीय तहको चुनावमा त देखिएन त ? कि यसमा चाँही तपाइहरुको टिकट पाउनु भएको थियो र चुप रहनुभएको हो ?
होइन यो विल्कुल गलत हो । अहिले मात्र आएर हामीले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक धारको कुरा गरेको होईन । हामीले त २०६४ साल देखि नै यो कुरा उठाइरहेका थियौँ, म त भन्छु २०५१ मा नै नेपाली काँग्रेस फुट्नु पथ्र्यो र फुटेको काँग्रेस २०६४ मा मिल्नै हुँदैनथ्यो । जब ०६४ नेपाली काँग्रेस एक भयो त्यो बेला देखिनै काँग्रेसले आफ्नो आदर्श सिद्धान्त भुल्दै पैसा र बाहुबलीको भरमा पार्टी चलाउँदै आएको छ । हामीले पटक पटक नेतृत्वलाई यसरी पार्टी चल्दैन ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समेत आदर्श मान्ने गरेको विपिको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तबाट नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व च्युत हुँदै गएको हामीले पायौँ । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको मुल सिद्धान्तबाट पार्टी विचलित हुँदै गएपछि विगत केही बर्ष देखीनै वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तीको खाँचो मुलुकलाइ छ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढेका थियौँ । त्यसैले यो जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यो सरासर गलत हो ।
मैले आरोप लगाएको भन्दा पनि तपाइहरुको व्यवहारले पुष्टि गरेको कुरा हो नी यो त ?
व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो देखिएको होला तर यो पार्टी गठनको मुल आधार भनेकै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो आदर्श पुरुषको सिद्धान्तबाट विचलित भएकोले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजबादको रक्षाको लागि नै यो पार्टी गठन भएको हो ।
तपाइको कुरा सुन्दा त तत्कालिन प्रजातान्त्रिक काँग्रेस र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरु र अहिलेका पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवालाई खुइल्याउन नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको भन्ने बुझिन्छ नी ?
कुनै व्यक्ति विषेशलाइ खुइल्याउने भन्दा पनि पार्टीको नीति र आदर्श विपरीत जाने सबैका विरुद्ध हाम्रो अभियान हो, चाहे त्यो देउवा हुन वा पौडेल ।
पार्टी मिल्नै हुँदैनथ्यो भन्ने तपाइको आशयले त तत्कालिन प्रजान्त्रिक काँग्रेस मुल पार्टीमा एकिकृत भएपछि सबै विग्रिएको जस्तो कुरा गर्नु भयो नी त ?
एक हिसाबले हो पनि । किनभने नेपाली काँग्रेस भित्र लोकतान्त्रिक पद्धती अपाउने कम्युनिष्टहरुको पनि आकर्षण बढ्दै थियो । केही हदसम्म पार्टी समाहित भएर काम गर्ने जमात पनि बढ्दै थियो । तर जब पार्टी एक भयो त्यसपछि धनवाद र डनवाद हावी हुन थालेपछि इमान्दार कार्यकर्ताहरु पछि पर्न थाले । जस्ले साँच्चै पार्टीको आदर्शलाइ पछ्याएर पार्टीमा काम गर्दै थिए ती पछि पर्न थाले र विस्तारै इमान्दार कार्यकर्ताहरुको पलायन हुन थाल्यो र पार्टी नीति विहिन, सिदान्द्ध विहिन हुन पुग्यो ।
पार्टी विग्रिँदै थियो भन्ने थाहा पाएपछि नेतृत्वलाइ सचेत गराउने की पार्टी छोडेर हिड्ने त ?
हामी विपि चिन्तन प्रतिष्ठानका साथीहरुले धेरै पटक सामूहिक, एकल रुपमा भेटेर सम्झाउने कोसिस गर्यौँ । एक्सपर्ट राखेर विपिको विषयगत नीतिको बारेमा नेताहरुलाइ बुझाउने कोसिस गर्यौँ । तर कसैले हाम्रो कुरा सुनेनन् । पार्टी सभापति लगाएत वरिष्ठ नेताहरुलाइ कार्यक्रममा बोलाएर यस बारे बुझाउने कोसिस गर्यौँ तर कसैले वास्ता गरेनन् । महामन्त्री ज्यू आउनुभयो उद्घाटन गरेर हिडनु भयो । उहाँको दिमागमा सत्ता र सम्पति बाहेक केही रहेन । हाम्रो कुरालाइ कसैले सिरियस रुपमा नलिएपछि हामीले यो कदम चाल्न बाध्य भएका हौँ ।
पार्टीले आफ्नो आदर्श विपरित अरुको लहैलहैमा लागेर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संघीयता जस्ता कुराहरुमा आफुलाइ उभ्यायो । जुन कुरा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्नुपथ्र्यो । यसमा पनि हाम्रो ठूलो विमती रही आएको छ ।
ए भनेपछि कार्यक्रममा नआउने, तपाइहरुको कुरा नसुन्ने, धर्म निरपेक्षता गणतन्त्र जस्ता कुराहरुमा मनलाग्दी गर्दै हिड्ने भनेर तपाइहरुको असन्तुष्टि हो ?
हो कतिपय कुरा यीनै । हामीले के भन्दै आएका छौँ भने यो देशमा सनातन हिन्दुधर्म कायम हुनुपर्छ र त्यसको लागि पनि हाम्रो अभियान हो ।
अनि गणतन्त्र र संघीयता ?
यी गम्भिर विषयहरु हुन यस्ता विषयहरुमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गरिनु पर्दछ ।
तपाइहरुले नेपाली काँग्रेस गठन गर्दै गर्दा उहाँको लिगेसी बोकेर हिड्ने, उहाँको आदर्श र पदचापलाइ फलो गर्ने भनेर आम जनतामा चिनिएका अनुहारहरु त तपाइको पार्टीमा कहीँ कतै देखिनुहुन्न नी ?
होइन धेरै साथीहरु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाइ निकै साहस र साथ दिइरहनु भएको छ । निकट भविष्यमानै उहाँहरुको साथ तपाइले देख्न सक्नु हुन्छ ।
अब पार्टीनै फुटाएर गइसक्नु भयो भने नामै भनिदिनुस न त को को हो तपाइको पार्टीमा सामेल हुन चाहने नेताहरु ?
अहिले नै नाम सार्वजनिक नगरौँ होला । हामी १६ गतेसम्म साथीहरुको नाम डिस्क्लोज गर्दैनौँ । अब यहि कार्तिक १६ गते पछि थाहा हुन्छ, कोको नेताहरु हामीमा सामेल हुनुहुन्छ भनेर ।
ए भनेपछि १६ गते सम्म टिकटको लागि कुर्ने अनि टिकट पाइएन भने तपाइहरुसंगै पार्टीले विपिको आदर्श मानेन भनेर आउने हो ?
त्यस्तो होइन । कति नेताहरुको आफ्नो वाध्यता छ ती सबै कुराहरुलाइ म्यानेज गरेर हाम्रो पार्टीमा आउनुहुन्छ । अवश्यनै राजनीति गर्ने मान्छहरुको केही कुराहरु त हुन्छन् नै । तर हामीले नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै गर्दा ती साथीहरुको साथ र सहयोग थियो र हुन्छ नै ।
अब चुनावको कुरा, तपाइ पनि उठ्दै हुनुहुन्छ होइन ?
हो म तनहुँको २ नम्बरबाट उम्मेद्वारी दिँदै छु । पहिलो चरणमा हाम्रो आन्तरिक तयारी नपुगेकोले चार पाँच वटा जिल्लामा मात्र स्वतन्त्र रुपमा हाम्रो उम्मेद्वारी परेको छ । भने दोश्रो चरणको लागि ४५ वटै जिल्लामा उम्मेद्वारी दिने हाम्रो तयारी छ । भने समानुपातिक तर्फ प्रदेश र केन्द्रको गरी १३० जना भन्दाबढीको नामावली बुझाएका छौँ ।
अहिलेको वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको देशभन्दा बाहिरको रसायनको बनेको गठबन्धन हो । जनताले यो कुरा बझेका छन् । त्यसैले राष्ट्रवादी चरित्र बोकेको नेपाली काँग्रेस (विपी)ले चुनाव जित्ने आधार बलियो बन्दै गएको मैले देखेको छु ।
अनि काँग्रेसको भोट काटेर, हेबिवेट क्यान्डिडेटहरुसंग चुनाव लडेर जित्नु हुन्छ त ?
तनहुँमा मेरो आफ्नै संगठन छ । मेरो व्यक्तिगत पहलले र सकृयताले बनेको संगठन भएकोल्े चुनाव जित्नेमा म ढुक्क छु । किनपनि भने पुष्प पराजुलीलाइ भोट हाल्ने मान्छे हिजो रुखमा भोट हाल्ने मात्रै नभएर एमाले माओवादीका साथीहरुले पनि मलाइ भोट दिनुहुन्छ । गाउँमा जनतासंग भिजेर काम गर्ने मान्छेलाइ भोट नदिए कस्लाइ दिने ।
हिजो काँग्रेसको राजनीति गरेको हुनाले पुष्प पराजुलीले काँग्रेसको मात्र भोट काट्छ भन्ने गरेको सुन्छु तर के हो पुष्प पराजुली सबै जनताको निमित्त राजनीति गरेको मान्छे हो । काँग्रेसका ती पुराना र काम नगर्ने नेता भन्दा जनताको प्रत्यक्ष घरदैलोमा पुगेर जनताको मर्म बुझ्ने नेता भनेर तनहुँबासीले चिनेका छन् । वाम गठबन्धनको नाममा केन्द्रमा जे भएपनि तनहुँका जनताले पुष्प पराजुलीलाइ चिनेका छन् र मलाइ भोट दिन्छन् भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।
अस्ति भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुख चिन्हबाटै चुनाव लड्दा त तनहुँका जनताले तपाइलाइ पत्याएनन् भने अब झन् फुटेर गएर चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के छ ?
अस्ति म चुनाव लडेको क्षेत्र भनेको कम्युनिष्ट बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ कहिले पनि काँग्रेसले चुनाव जितेको छैन । फेरी त्यो स्थानीय तह भनेको सानो इकाइ हो । कम्युनिष्ट बाहुल्य भएको सानो इकाइबाट चुनाव लड्दा थोरै मतले मात्र म पराजित भएको हुँ । अब म चुनाव लड्ने क्षेत्र भनेको वृहत छ । जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मैले कम्युनिष्टहरुको मत पाएको थिएँ यसैको आधार मेरो पनि व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा मैले चुनाव जित्छु ।
पुष्प पराजुलीलाइ जनताले चिनेका होलान् तर तपाइको नयाँ पार्टीको बारेमा कहिंकतै कसैलाइ पनि जानकारी छैन, रुखमा भोट हालेर पुष्प पराजुलीले चुनाव जित्ने अवस्था रहेन । विना प्रचार प्रसार र हल्लाखल्ला नगरीकन तपाइले चुनाव जित्ने आधार त देखिँदैन नी ?
हो विविध कारणले हामीले पार्टीको प्रचार प्रसारलाई तिव्र बनाउन सकेका छैनौ । अव आज भोली बाटै योजनावद्ध ढंगले पार्टीको बारेमा जनतालाइ जानकारी गराउने अभियानमा छौँ । अब छिट्टैनै जनतामाझ नेपाली काँग्रेस (विपी) लोकप्रिय पार्टीमात्रै होइन आगामी ५ बर्ष भित्रमा नेपालकै पहिलो पार्टी बनाउने अभियान हाम्रो हो र यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्नेमा दृढ विश्वास पनि छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल मात्र नभएर विश्वमा जहाँपनि निर्वाचनमा आदर्श र सिद्धान्त भन्दा पैसा हावी भएको देखिन्छ । यो कुरा तपाइहरुले बुझ्नु भएको होला । यो चुनावको लागि नेपाली काँग्रेस (विपी) र तपाइलाइ आर्थिक रुपमा कस्ले सहयोग गरेको छ ?
एउटा कुरा के भने पद र पैसाकै भरमा चुनाव लड्ने र भए हामीलाइ पुरानै पार्टी ठिक थियो । हो पार्टी चलाउन केही पैसा चाहिन्छ, त्यो हामी शुभचिन्तक र पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट सहयोग माग्छौँ । गच्छेअनुसारको सहयोग गर्न सबैलाइ आग्रह गर्दछौँ । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, अवश्य भष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा म पर्दिन । त्यसैले म संग पैसा छैन । तर आम जनताले पुष्प पराजुलीको पृष्ठभुमी, आदर्श र सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् ।
विकास र सुशासनको कुरा गर्नुपर्दा देशमा आवश्यकता अनुसार विकासका पुर्वाधारहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने छन् भने गणतन्त्र आइसकेपछि यसको नाम भजाएर भष्ट्राचार गर्ने नेताहरु हाम्रो निशानामा पर्नेछन् ।
नेपालको इतिहासमा मुल पार्टीसंग असहमती राखेर, सिद्धान्त र आदर्शको कुरा लिएर पार्टीबाट बाहिरिनेहरु कि त अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन् कि त पेन्डुलम भएर बसेका छन् । सिपि मैनाली, बाबुराम भट्टराइ यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तपाइको पार्टी चाँही कसरी उठ्छ त ?
बाबुरामजी पार्टीको फष्ट म्यान बन्ने लालसामा पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको हो । उहाँ न कम्युनिष्ट, न प्रजातन्त्रवादी । सिद्धान्तहिन राजनीति गर्ने मान्छेको भविष्य कहीँ पनि छैन र उहाँको अहिलेको स्थिती हामी सबैले देखेका छौँ । केवल आफ्नो भविष्य कता सुरक्षित हुन्छ, कहाँबाट टिकट पाउँछु भनेर यता र उता दौडिरहनु भएको छ । सिपि जी को पार्टीमात्रै संगठन छैन ।
हामी नेपाली काँग्रेस (विपी) भनेको आदर्श र सिद्धान्त सहित देशभरी संगठन भएको पार्टी हो । विपि चिन्तन प्रतिष्ठान देशभर सन्जाल भएको संस्था हो र यसैमा रहेर काम गरेका साथीहरुको संयुक्त प्रयासबाट नयाँ पार्टी गठन भएको हो । त्यसैले हामीसंग संगठन र सिद्धान्त दुवै मजवुत अवस्थामा छ र अबको ५ बर्ष भित्र हामी देशकै ठूलो पार्टी बन्छौँ ।
गणेशमान सिंह कृष्णप्रसाद भट्टराइ जस्ता टावरिगं पर्शनालिटी भएको राजनेताहरुलाइ थांग्नामा सुताउन सक्नेहरुसंग विद्रोह गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
हामी सिद्धान्तको राजनीति गर्ने समूह हौँ । व्यक्तिगत रुपमा कसैको विरुद्ध हामी छैनौँ । अहिले पनि हाम्रो नजिकको सहयात्री भनेको नेपाली काँग्रेसनै हो । खाली के हो भने विपीको आर्दश र सिद्धान्तलाइ भुल्यो, यसलाई जोगाइराख्नु पर्छ । दुनियाले मानेको कुरो हामी आँफैले विर्सन थाल्यौँ भन्ने हो । आज पनि नेपाली काँग्रेस र नेपाली समाजको आधारभुत सिद्धान्त भनेको विपी कोइरालाकै विचारमा आधारित छ र त्यही त्यसैलाइ हामीले आदर्श मानेका छौँ भने हामीलाई त्यती गाह्रो नहोला ।
वामपन्थीहरु एकजुट हुँदैछन् तपाइहरु चोइटिँदै हुनुहुन्छ, फेरी प्रजातान्त्रिक समाजवादको पनि कुरा गर्नुहुन्छ । आधुनिक राजनीतिमा अंक गणितले धेरै महत्व राख्दछ, अब तपाइहरुको कदमले त वामपन्थीहरुलाइ साम्यवादमा पुग्न झन् सजिलो बनाउने भयो है ?
यो वामपन्थीहरुको गठबन्धन भनेको दुइदिनको रामछायाँ मात्र हो । यीनीहरु कालान्तरसम्म मिलेर जान सक्छन् भन्ने मलाइ कत्तिपनि विश्वास छैन । र आजको युगमा नेपालमा साम्यावदको सपनामत्र देख्न सकिन्छ व्यवहारमा लागु गर्न कुनै पनि हालतमा सकिन्न । नेपालमा कम्युनिष्टहरु मिलेर साम्यवाद आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।
र अन्त्यमा केही ?
हामीले यो देशमा सबैले आदर्श मानेका राजनेता विपी कोइरालाको सिद्धान्त र आदर्शलाइ अघि बढाउने स्वरुप नेपाली काँग्रेस (विपी) को गठन गरेका छौँ । यो देशको राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई मजवुत बनाउन आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस (विपी)को चुनवा चिन्ह करुवा मा मतदान गरी विजयी गराइदिनु हुन सम्पुर्ण देशवासीहरुलाइ आग्रह गर्दछु ।